Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Afghanistan » Taliban dia maniry an'i Torkia hitantana ny seranam-piaramanidina Kabul
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Turkey Breaking News • Vaovao isan-karazany
Taliban dia maniry an'i Torkia hitantana ny seranam-piaramanidin'i Kabul
Nilaza ny filoha Tiorka Erdogan fa tokony haverina ao Kabul ny fitoniana alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra eny amin'ny seranam-piaramanidina, ary ahiana ho "voasaroka" amina zavatra izay sarotra hazavaina noho ny tsy fahazoana antoka momba ilay iraka mety hitranga.
Tapa-kevitra ny amin'ny fangatahana Taliban hanampy amin'ny fampandehanana ny seranam-piaramanidin'i Kabul i Torkia.
Ny filoha Tiorka Recep Tayyip Erdogan dia nilaza fa eo am-piomanana ny fifanakalozan-kevitra miaraka amin'i Taliban.
Ny fifanakalozan-kevitra dia natao tao amin'ny toby miaramila tao amin'ny seranam-piaramanidina Kabul izay misy ny masoivohon'i Torkia.
Torkia dia nanao ny dinika voalohany nifanaovany tamin'ny Taliban momba ny fanampiana amin'ny fitantanana ny seranam-piaramanidina eto an-drenivohitra androany tao amin'ny toby miaramila tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Kabul izay nijanonan'ny masoivohon'i Torkia vonjimaika.
Ny filohan'i Torkia Recep Tayyip Erdogan
Raha ny filazan'ny filoha tiorka Recep Tayyip Erdogan dia mbola nanombana ny tolotr'i Taliban hanampy amin'ny asa i Ankara Seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Hamid Karzai (KBL) any Kabul dia mety ilaina ny resaka maro hafa alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra.
"Nanao ny dinika voalohany nataontsika tamin'ny Taliban izahay, izay naharitra adiny telo sy sasany," hoy i Erdogan. “Raha ilaina dia hanana fotoana hanaovana dinika toy izany indray isika.”
I Torkia dia nanana tafika an-jatony tany Afghanistan ho ampahany amin'ny iraka OTAN, ary tompon'andraikitra tamin'ny fiarovana ny seranam-piaramanidina nandritra ny enin-taona lasa.
Ho valin'ny tsikera ao an-trano noho ny fifandraisan'i Torkia tamin'ny vondrona mpampihorohoro, nilaza i Erdogan fa “tsy manana rendrarendra” i Ankara hijoroana any amin'ny faritra mikorontana.
“Tsy azonao fantarina izay antenain'izy ireo na izay antenainay raha tsy miresaka. Inona ny diplomasia, namako? Ity dia diplaomasia, ”hoy i Erdogan.
Torkia dia nikasa ny hanampy amin'ny fiarovana sy fitantanana ny seranam-piaramanidina stratejika ao Kabul, saingy tamin'ny alarobia lasa teo dia nanomboka nisintona ny tafika hiala tao Afghanistan izy - famantarana hita fa nandao an'io tanjona io i Ankara.
Nilaza i Erdogan fa te hanara-maso ny filaminana any amin'ny seranam-piaramanidina ny Taliban, ary manolotra an'i Ankara ny safidy hitantana ny lozisialy.
Nilaza izy fa ny baomba kambana namono tena izay namono olona farafahakeliny 110, anisan'izany ny tafika amerikana 13, tany ivelan'ny seranam-piaramanidina nandritra ny andro farany nanafihana maika ny alakamisy dia nampiseho ny maha-zava-dehibe ny fahalalana ny antsipirian'ny fomba hiarovana ny foiben'ny rivotra.
Nilaza i Erdogan fa tokony haverina ao Kabul ny fitoniana alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra eny amin'ny seranam-piaramanidina, ary ahiana ho "voasaroka" amina zavatra izay sarotra hazavaina noho ny tsy fahazoana antoka momba ilay iraka mety hitranga.
“Hoy i Taliban: 'Hataonay antoka ny filaminana, ampandehaninao ny seranam-piaramanidina'. Tsy mbola nandray fanapahan-kevitra momba ity olana ity izahay, ”hoy i Erdogan.
Ankara hatreto dia namindra miaramila farafaharatsiny 350 ary olona maherin'ny 1,400 avy any Afghanistan hatramin'ny nahalasan'ny Taliban tamin'ity volana ity.
Erdogan, izay nitsikera ny Taliban teo aloha rehefa namakivaky ny firenena ho any Kabul izy, dia nilaza fa mikendry ny hamita ny fialana haingana sy ny fialan'ny miaramila haingana araka izay tratra i Torkia.